Eedeeysane lagu ridey xukun ah xabsi daa'in - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: AP Photo/Rebecca Blackwell/Scanpix
Eedeeysane lagu ridey xukun ah xabsi daa'in
La daabacay torsdag 20 juni 2013 kl 12.15
Maxkamadda degmada Stockholm ayaa ku riday xukun ah xabsi daa'in Stanislas Mbanenande oo ah nin 54 jir ah iyadoona lagu soo eedeeyey inuu ka geeystay dalka Ruwaanda fal-dembiyeed la xiriira xasuuq, waana markii ugu horeeysay ee dalka Iswiidhen lagu xukumo shakhsi dembiga xasuuqa.
Go'aanka maxkamadda ayey ku caddaatey in eedeeysanuhu uu muddo 100 maalmood ah oo u dhexeeysay 6 abriil iyo 18kii luulyo ee sannadkii 1994, oo uu dalka ruwaanda ka socday xasuuq uu gacan ka geeystay xasuuq ka dhacay mnawaaxiga Kibuye prefektur ee galbeedka dalkaasi. Xasuuqa dalka ruwaanda ka dhacay ayey ku naf waayeen dad gaarsiisan 800 000 oo ruux.
54-jirka ayaa sidoo kale lagu xukumey meel kaga dhac xuquuqda shacabka
Maxkamadda degmada Istockholm ayaa sheegtay in loo aqoonsan karo in eedeeysanuhu yahay sidii ísagoo gacantiisa ku geeystay fal-dembiyeedyada. Maadaama uu kaalinh ballaaran ka qaatay isaga oo ey iska kaashaneyaan dadyoow kale dembiyo isugu jira dil, isku day dil iyo qafaal ka dhacay dalka Ruwaanda.
Shakhsiyan ayuu gacan ku lahaa falal dil ah oo lagu laayey xasuuq ka dhacay goobo kala duwan ee dalkaa ku yaala iyada oo loo adeegsaneyo banaatiikh.
Eedeeysanaha uu xukunku ku dhacay ayaa ka soo jeeda qowmiyadda Huutuuga ee aqlabiyadda ku ah dalka Ruwaanda, hase yeeshee haysta dhalashada dalkan Iswiidhen. Iyada oo falalka xasuuqa ahina looga gol lahaa sidii loo tirtiri lahaa qowmiyadda Tuutsiga gebi ahaan ama badankood.